यी १२ कर्म जसलाई "महापाप" को संज्ञा दिइएको छ! 12 Deadly Sins
January 30, 2018 Rochak Jankarideadly sins
सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउ‘दैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यी ४ राशी भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती !
५.कुनै पनि गर्भवती महिलालाई नराम्रो बचन लगाउँनु वा आफ्नो कुराले उसको चित्त दखाउँनु पाप मानिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सफलताको १६ मन्त्र । पालना गर्नुस, जिन्दगीमा हुनेछ आमुल परिबर्तन
१२. मदिरा सेवन गर्नु, गुरुको पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउँनु, दान दिइएको सामान फिर्ता ल्याउँनु महापाप मानिन्छ।